23-jir soomaali ah oo qirtay inuu ku biiray una soo dagaalamay Daacish - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub 23-jir soomaali ah oo qirtay inuu ku biiray una soo dagaalamay Daacish
Wiilkan oo ay sirdoonka Norwey qabteen July 2015 asagoo kasoo noqday siiriya ayaa qirtay inuu usoo dagaalamay uunana ka tirsanaa ururka la baxay khilaafada islaamiga ah ee Daacish. Waxa uuna sheegay inuu rabay inuu ku hoos noolaado dowlad iyo xukun islaami ah. Waxa uuna Norwey ka tagay oktober 2014
Hay-ada Sirdoonka Norwey ee PST ayaa ka shikasan inuu wiilkan maskixayan dheelitaranyahay, sidaas darteed codsatay baaritaan-maskaxeed. Sidoo kale maxkamadeyntiisa ayaa dib loo dhigayaa ilaa laga ogaanayo jawaabta baaritaanka oo saameyn ku yeelan doonto qaabka loo maxkamadeyn doono. Hadii ay cadaato inuu maskaxiyan dhimanyahay, waxaa dhici karta in lagu qasbo in la dhigo meelaha loogu talagalay dadka danbigu ku cadaaday, balse aanay xukun xabsi caadi ah uusan qabin karin.
Wiilkan ayaa xirnaa ilaa markii lasoo qabtay, waxuuna sii xirnaan doonaa inta go aan laga gaarayo qaabka maxkadeyntiisa.
Les saken på norske her:
Previous articleSoomaalida oo turjumaan ka dhigato caruurta yar-yar.
Next articleBanaanbax looga soo horjeedo barnevern-ka oo ka dhacay 20 wadan